Uzibulele "obengasaguli ngokwengqondo" esibhedlela | News24
Uzibulele "obengasaguli ngokwengqondo" esibhedlela
Johannesburg - Isiguli esigula ngokwengqondo sishone ngemuva kokuphuma ngefastela esibhedlela iSouth Rand eGoli besisanda kudluliselwa ewadini elijwayelekile ngemuva kokuhlolwa isimo sempilo yaso, kusho uMnyango wezeMpilo eGauteng.
Lokhu kulandela ngemuva kwezinyanga ezintathu isiguli esigula ngokwengqiondo sidlwengule umhlengikazi kuso lesi sibheldlela.
OLUNYE UDABA: Uboshiwe unesi ngelokudlwengula
Isidumbu sale ndoda eneminyaka negu-49 ubudala sitholwe ngunogada ngoLwesine ekuseni ogijime wayobikela abesibhedlela. Ákwaziwa ukuthi le ndoda iphume nini ngefastela ngoba isidumbu sayo besesibamda ngesikhathi sitholakala sidindilize phansi.
Okhulumela umnyango wezeMpilo uSteve Mabona uthe le ndoda yangeniswa esibhedlela ngomhlaka-24 Ephreli igula ngokwengqondo kodwa yabe isidluliselwa ewadini elijwayelekile ingazitshengisi izimpawu zokugula kulandela ukuhlolwa, kubika iThe Star.